Sida loo cusbooneysiiyo barnaamijyada ku saabsan iPhone iyo iPad-ka oo leh iOS 13 | Wararka IPhone
IOS 13 ayaa hada loo heli karaa dhamaan isticmaaleyaasha haysta iPhone 6s ama ka sareeya. Nooc kasta oo cusub oo iOS ah, shirkadda Cupertino badanaa wax ka beddel goobta shaqooyinka qaarkood lagu heli karaa noocyadii hore. Mid ka mid ah, waxaan ku aragnaa suurtagalnimada in aan cusbooneysiin karno codsiyada.
Iyadoo la adeegsanayo macruufka 12 iyo noocyadii hore, si loo cusbooneysiiyo iyo / ama loo hubiyo haddii nooc cusub ama cusbooneysiin ah barnaamijyada aan ku rakibnay aaladdayadu ay ku yaalliin App Store, waa inaan kaliya fur arjiga oo guji Cusbooneysiinta. Iyadoo macruufka ah 13, tab ayaa la waayey, sidaas beddelay habka loo sameeyo.
Sababta kaliya ee ay ahayd Apple inay bedesho habka cusbooneysiinta barnaamijyadu waa maxaa yeelay waxaad rabtaa cusbooneysiinta barnaamijka inay ahaato otomaatig, iyo inaanan ahayn isticmaaleyaasha ay tahay in lagu qasbo inay cusbooneysiiyaan, gaar ahaan kuwa aan dooneynin inay si otomaatig ah u cusbooneysiiyaan barnaamijyadooda, hawl horeyba loo heli jiray.
1 Cusboonaysii barnaamijyada ku jira iOS 13
1.1 Qaabka 1
1.2 Qaabka 2
Cusboonaysii barnaamijyada ku jira iOS 13
Marka hore, waxaan ku wajahan nahay ilaa app Store
Marka xigta, dhagsii avatar-ka muujinaya koontadayada tufaaxa, oo ku yaal geeska midig ee kore.
Ka hooseeya Talooyinka Custom, tirada codsiyada inta cusboonaysiinta la sugayo la soo bandhigayooo ay la socdaan badhanka Cusbooneysii dhammaan. Haddii aan u qaabeyney terminal-ka si cusbooneysiintu ay otomaatig u noqdaan, qalabku wuu cusbooneysiin doonaa markii uu rarayo.
Waxaan qabanaa astaanta Dukaanka App.
Xulashada kala duwan ee muuqaalka muuqaalka ahi na tusayo, ayaannu ka xulannaa Cusbooneysiinta.
Kadib isla daaqada ayaa lagusoo bandhigi doonaa sidii qaabkii hore, markaa waa inaan gujino kaliya Cusbooneysii dhammaan, si cusbooneysiinta dalabka loogu rakibo aaladdayada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Sida loo cusbooneysiiyo barnaamijyada ku saabsan iPhone iyo iPad-ka oo leh iOS 13
Ma aanan ogeyn habka labaad, waxaan u maleynayaa inay tahay inaan tijaabiyo astaan ​​kasta si aan u arko waxa astaamaha cusub "qarsoon yihiin" ugu yaraan SE in menu macnaha guud uu cusub yahay.